1 Korinte 9 | IBhayibheli Elikuyi-Internet | INguqulo Yezwe Elisha
9 Angikhululekile yini?+ Angiyena yini umphostoli?+ Angimbonanga yini uJesu iNkosi yethu?+ Aniwona yini nina umsebenzi wami eNkosini? 2 Uma kwabanye ngingeyena umphostoli, ngokuqinisekile nginguye kini, ngoba nina niwuphawu oluqinisekisa+ ubuphostoli bami ngokuqondene neNkosi. 3 Ukuzivikela kwami kulabo abangihlolayo yilokhu:+ 4 Sinalo igunya lokudla+ nokuphuza, akunjalo? 5 Sinalo igunya lokuhola udade njengomfazi,+ njengabo bonke nje abanye abaphostoli nabafowabo+ beNkosi noKhefase,+ akunjalo? 6 Noma, ingabe yimi noBarnaba+ kuphela abangenalo igunya lokuyeka umsebenzi wokuziphilisa?+ 7 Ubani oke akhonze njengesosha ngezindleko zakhe siqu? Ubani otshala isivini kodwa angasidli isithelo saso?+ Noma, ubani owalusa umhlambi kodwa angadli obisini lomhlambi?+ 8 Ingabe ngikhuluma lezi zinto ngokwezindinganiso zabantu?+ Noma ingabe uMthetho+ nawo awuzisho lezi zinto? 9 Ngoba emthethweni kaMose kulotshiwe ukuthi: “Ungayifaki isifonyo inkabi lapho ibhula.”+ Ingabe yizinkomo uNkulunkulu azikhathalelayo? 10 Noma ingabe ukusho ngenxa yethu ngokuphelele? Ngempela kwalotshwa ngenxa yethu,+ ngoba umuntu olimayo kufanele alime ngethemba nomuntu obhulayo kufanele abhule ngethemba lokuba adle.+ 11 Uma sihlwanyele izinto+ ezingokomoya kini, ingabe kuyinto enkulu uma sizovuna kini izinto zenyama?+ 12 Uma abanye abantu besebenzisa leli gunya phezu kwenu,+ asilisebenzisi yini thina nakakhulu? Noma kunjalo, thina asilisebenzisanga leli gunya,+ kodwa sibekezelela zonke izinto, ukuze singabeki sithiyo ezindabeni+ ezinhle mayelana noKristu. 13 Anazi yini ukuthi amadoda enza imisebenzi engcwele adla+ izinto zasethempelini, nalawo akhonza+ njalo e-altare anesabelo kanye ne-altare? 14 Ngale ndlela futhi, iNkosi yamisa+ ukuba labo abamemezela izindaba ezinhle baphile ngezindaba ezinhle.+ 15 Kodwa mina angisebenzisanga nelilodwa lala malungiselelo.+ Ngempela, lezi zinto angizilobelanga ukuba kube njalo kimi, ngoba bekungaba ngcono kakhulu ngami ukuba ngife kunokuba—akukho muntu ozosenza ize isizathu sami sokuziqhayisa!+ 16 Manje, uma mina ngimemezela izindaba ezinhle,+ akusona isizathu sokuba ngiziqhayise, ngoba kubekwé isidingo+ phezu kwami. Empeleni, maye+ kimi uma ngingazimemezelanga izindaba ezinhle! 17 Uma lokhu ngikwenza ngokuzithandela,+ nginomvuzo;+ kodwa uma ngikwenza ngingathandi, kuyafana ngoba nginobuphathi+ engibuphathisiwe. 18 Khona-ke, uyini umvuzo wami? Uwukuthi nakuba ngimemezela izindaba ezinhle nginikeze izindaba ezinhle ngaphandle kwenkokhiso,+ ukuze ngingalisebenzisi kabi igunya lami ezindabeni ezinhle. 19 Ngoba, nakuba ngikhululekile kubo bonke abantu, ngiye ngazenza isigqila+ sabo bonke, ukuze ngizuze+ abantu abaningi. 20 Ngakho kumaJuda ngaba njengomJuda,+ ukuze ngizuze amaJuda; kwabaphansi komthetho ngaba njengophansi komthetho,+ nakuba mina ngokwami ngingekho phansi komthetho,+ ukuze ngizuze labo abaphansi komthetho. 21 Kulabo abangenawo umthetho+ ngaba njengongenawo umthetho,+ nakuba ngingeyena ongenawo umthetho ngakuNkulunkulu kodwa ngiphansi komthetho+ ngakuKristu,+ ukuze ngizuze labo abangenawo umthetho. 22 Kwababuthakathaka ngaba buthakathaka, ukuze ngizuze ababuthakathaka.+ Ngiye ngaba yizinto zonke kubantu bazo zonke izinhlobo,+ ukuze ngazo zonke izindlela ngisindise abathile. 23 Kodwa ngenza zonke izinto ngenxa yezindaba ezinhle, ukuze ngibe umhlanganyeli+ wazo nabanye. 24 Anazi yini ukuthi emncintiswaneni abagijimi+ bagijima bonke, kodwa munye kuphela owamukela umklomelo?+ Gijimani+ ngendlela yokuba niwufinyelele.+ 25 Ngaphezu kwalokho, wonke umuntu onengxenye emncintiswaneni uyazithiba+ ezintweni zonke. Yiqiniso, bona bakwenza ukuze bathole umqhele owonakalayo,+ kodwa thina ongonakali.+ 26 Ngakho-ke, indlela engigijima+ ngayo akuyona engaqinisekile; indlela engiqondisa ngayo amagalelo ami ingeyokuba ngingashayi umoya;+ 27 kodwa ngiyawutuba umzimba+ wami futhi ngiwuphatha njengesigqila, ukuze kuthi, ngemva kokuba sengishumayele kwabanye, mina ngokwami ngingabi ongamukeleki+ ngandlela-thile.